UDE LA SOUL: UMHLA WOKUHLOLA WEALBHAMU - IINDABA
Ukuphelisa iminyaka yabo eli-15 bebaleka kuTommy Boy, ukukhutshwa kweSanctuary yokuqala yeDe La Soul inezinto zonke ezinenkwenkwezi yabantu abasebenza phantsi komhlaba-kubandakanya uMadlib, u-9 Wonder, uJay Dee, kunye nomdlali ophambili uSupa Dave West- bexhasa ngobuchule i-cagy yesiqhelo yesithathu. Iingoma eziqinisekileyo.
UDe La Soul, amantshontsho amadala amabi e-hip-hop angapheliyo, bahlala belahla uhlobo lohlobo yosuku ndithanda ukulawulwa ngumculo. Xa iNWA kunye ne-West Coast gangster nihilism yabetha iitshathi, abathathu balwa no-E kunye no-Cube's thuggery ngeentyatyambo kunye ne-hi-top fade. Xa u-Bad Boy wayenendawo yokurhola kweli shishini, uDe La Soul waphikisana nabo Izibonda ziphezulu Manifesto. Ngoku, kunye neebhere-knit sweatshi kunye neeti ezimhlophe emlilweni- nasemva kokuba uTommy Boy ewise iesile ezintathu zeSpitkickin ngenxa yokuswela ukunxanelwa urhwebo- uPosdnuos, uTrugoy noMaceo baphonononge Umhla wokusila .
Emva kweminyaka eli-15, ababukeli abaninzi babezibuza ukuba ingaba i-DiMaggio-efana ne-streak entsha iza kufa nini. I-triumvirate i-avareji yeminyaka emithathu phakathi kwe-albhamu- ukuntywila kunye nokubonisa iimpahla zabo ezimnyama zamahashe ayisiyonjongo yobusuku- kodwa iziphumo zihlala zikulungele ukulinda, kwaye Umhla wokusila Yeyona nto ifunyanwa liqela kwiminyaka.
Masithembeke: Nantoni na uMateyu Knowles (onoxanduva lokuzala ixhoba lakhe uBeyonce kunye nomnini weDe La kwikhaya elitsha leSanctuary Union), yivinyl dynamite. Ngapha koko, nayiphi na i-albhamu eqala ngomsebenzi wezandla zikaJermaine Jackson inobuhlakani ebhaliweyo kuyo yonke. Kodwa umlingani ohlala rhoqo waseDe La uSupa Dave West wokuvula ivolley usebenza njengejumpoff yomvelisi wekhaya runby, kwaye uDe La Soul ngobulumko avumele iqela labo le-beatmaking group (Madlib, 9th Wonder, Jay Dee, kunye noSupa Dave okhankanywe ngasentla, phakathi abanye) ukwenza isithuthi apho abathathu banokuphinda bahlaziye isimbo sabo.
Ufakelo lwesithathu lwefayile ye- Ubukrelekrele obuSemthethweni boBugcisa uthotho lwalucingelwa njenge-albhamu ye-DJ ngaphambi kokuba uTommy Boy ayenze. Umhla wokusila Ilifa le projekthi kukuthambekela kwemveliso yendalo, njengoko uDe La ehlala enobulumko evumela ukubetha kubethe. Kwi-'Verbal Clap ', uJay Dee utyhala istrarse, apocalyptic swirl engenalo uphawu lwentengiso kodwa iyangxola ngamandla. Izitshixo zomoya kunye nomgibe othulisiweyo ukuze uthimbe abaphulaphuli ukuba uPos, Maceo, noDave bafihlwe ngokuzithandela. Nokuba uGhostface ubonakalisa umzuzu wobuthathaka xa esokola ukutshatisa ubhedu oloyiso kwiSupa Dave West's 'Uyeza' (nangona uTony Spark ekwazi ukubuyisa isiqu sakhe ngokukhwaza ku-Uday naseQusay).
isenzo siqengqele igolide
Ewe kunjalo, uDe La uzisa iimpahla zabo ezinengoma ngeFreshDirect ngokuthuthuzela kunye nokukhululeka kwamagqala anamava. Ingoma yesihloko isebenza njengendawo ephambili yelicwecwe njengoPos noDave bayalela imic ngemagunya kunye nefinesse. UDave utsiba amathe, 'Nyama usile, gaya isitalato, nokuba yintoni irhamncwa / ndiyithabathe ezimpondweni ukubiza iinzwane ezipinki.' Ukuguquguquka kuka-Pos kunye noMaceo kuyinto engaqhelekanga njengoko bephinda benceda iimeko zabo ukujija imikhondo kwi-coalescence. I-vibes kunye nokudibanisa iglasi kwi-'eBhegi zokuthenga 'zidibene ngaphandle komthungo kunye nePos' imemoring memo re: iingozi zabacimi begolide: 'Uthi gxuma / Uyakhwaza,' Kulungile, ndiyalayishwa kwakhona! '/ Nigga, nina zidubulo . ' Baze bakwazi nokuzoba uCarl Thomas ongafanelekanga emngxunyeni wokuguda.
NjengeeYummy croons 'andinakuze ndithi ndlela-ntle' ngo 'Hayi', uDe La Soul uphinda uluvo. Umhla wokusila idibanisa iqela elingenakucingelwa labavelisi abatshisayo bangaphantsi komhlaba kunye ne-meshes yabo ye-idiosyncrasies ngaphandle kokungavisisani. Kodwa okona kubaluleke nangakumbi, ukuba oku kugqityiwe kwirekhodi yokugqibela yesithathu, baya kube bephumile benekratshi, ngokuzithemba okungagungqiyo nokuzimisela.
I-ludacris theatre yengqondo
inkosana enye nite yodwa iyaphila
rap quote malunga nemali
icephe musa wena evah
ii-albhamu ze-pitchfork 10/10